GIMP 2.10.10 ikozvino yawanikwa pamwe nekuwanda kunonakidza kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndinorangarira imwe nguva yapfuura apo ini ndakanga ndisiri chaizvo fan of GIMP. Chokwadi avo imi vanga muchishandisa kwenguva yakareba mucharangarira pakavhurwa mahwindo matatu echirongwa chimwe chete uye ini handizive nezvako, asi ndinorangarira kuti kugoverwa kwaro kwaive nyonganiso. Nguva pfupi yapfuura ichivandudzwa ine yakawanda yakajeka interface uye muhwindo, izvo zvakandibatsira kuzviita uye kukanganwa nezve Photoshop (kuburikidza neWine). Uye kana anga achitofara, GIMP 2.10.10 zvinoita kuti zvinyanye kudaro.
Maawa mashoma apfuura, Iyo GIMP Yekuvandudza Chikwata Yakazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani. Mutsamba yavo inodzidzisa vanotiudza kuti ivo havana kuvandudza chero chinhu kwenguva yakareba, asi izvo Kumirira kwaive kwakakodzera. Kunyangwe iyo yekumirira yapfuura chete kune vashandisi veLinux: iyo vhezheni yeWindows uye macOS ichaburitswa gare gare, ivo havataure kuti riini, uye ivo vachaziviswa zvakasiyana.
GIMP 2.10.10: iyo yekumirira yaive yakakosha
Izvo zvakakosha zveGIMP 2.10.10 ndezvi:
Mutsetse wehunyanzvi kuona.
Kusiyana kwekushandisika kwekuvandudza mune ekushandura maturusi.
Yakabatanidzwa Sample sarudzo yakawedzerwa kuSanitize sarudzo uye yakagadziriswa Clone chishandiso.
Parametric brushes ikozvino ine 32-bit chaiyo pachiteshi.
Rakareruka bhurasho uye pateni kufambiswa kwemabasa kugadzirwa.
Kusarudzwa kwematanho pane canvas.
Inokurumidza kutumira kunze / kuchengetedza kweboka revara kupa.
Pakutanga rutsigiro rweDDS.
Zvakawanda zvakagadziridzwa kuGEGL, iyo injini yekugadzirisa injini.
Mutsamba yaro inodzidzisa iwe une zvimwe zvakawanda zvezvinoreva izvi zvese nemifananidzo inosanganisirwa seinotevera:
Asi, sekuziva kwako kare, chokwadi chekuti software yaburitsirwa Linux hazvireve kuti inogona kuiswa nenzira yakasununguka. Panguva ino, kana tichida kuisa GIMP 2.10.10 tichafanirwa kuzviita kurodha pamurume nemaoko kubva kurodha peji kana rake Flatpak vhezheni. Kana iwe uchida sarudzo yakasununguka, mumazuva mashoma iyo vhezheni nyowani inofanira kuoneka mune ese software masisitimu eiyo chero Linux inoshanda sisitimu.
Wakatove wakaedza GIMP 2.10.10? Chii chawacherekedza mushanduro nyowani?
Iyo itsva vhezheni yeGIMP 2.10.6 inosvika nerutsigiro rwemberi zvinyorwa uye nezvimwe
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » GIMP 2.10.10 ikozvino yawanikwa pamwe nekuwanda kunonakidza kugadzirisa. Panguva ino chete yeLinux
Izvo zvakanaka! Haisi iyo yakapfava yandinoshandisa zuva nezuva, asi kana kakati wandei vhiki kugadzirisa mamwe maficha evhidhiyo muYT
Handina kumbobvira ndanzwisisa izvi kubva kuGimp. Iyo puppy logo inoita kuti mushandisi asaone chishandiso seimwe yakakomba imwe nzira kune photoshop. Zvinoita kunge chirongwa chevana uye pakupedzisira chavakawana ndechekuti chinongoshandiswa muzvikoro. Yekumusoro-kusvika-pasi facelift kutanga ne logo shanduko yaizoita iyi show zvakanaka. Kwaziso
Sezvo iyo Photoshop yaishamisa, iri PS, inogona kuvhiringidzwa neyemavara edhitaina
Pep torro akadaro
Nezuro ndakaisa 2.10.10 kuburikidza neFlatPak pane Linux Mint 19.1. Zvese zvakanaka, kana ndoda.
Sezvo ini ndichitumira Rawtherapee kuGimp, handisi kuiwana. Usashuvira RimaTable futi. Pane kupokana, kana uchivhura RAW kubva kuGimp haina kuwana Rawtherapee kana RimaTable, kana mafraw kana dcraw plugins.
Iyo FlatPak, handizive kuti inoisepi iyo Gimp yekuudza Rawtherapee nzira kwairi. Saka kubva mundangariro ndinofunga yaive mu / usr / share / bin, ndakatarisa asi handiwani.
Chimwe chinhu. Kana 2.10.10 yaiswa, ndakaona kuti 2.10.8 yakanga ichiri kuiswa uye ichishanda (?) Ini ndakaisa 2.10.8 uye 2.10.10 inoshanda zvakanaka. 'gimp-plugin-registry' haishande kana.
Pindura Pep Torro